ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ H.E. Mr. Troung Tan Sang အား သွားရောက်တွေ့ဆုံ | Pyithu Hluttaw
7 September 2014 - 0
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း သည် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ H.E. Mr. Troung Tan Sang အား ၂၀၁၄ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁၄၀၀ နာရီ အချိန်တွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟနွိုင်းမြို့ရှိ သမ္မတအိမ်တော်သို့ သွားရောက်တွေ့ ဆုံ နှုတ်ဆက်သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့သည် လွတ်လပ်ရေးရပြီးချိန်မှ စတင်ကာ မိတ်ဖက်နိုင်ငံများဖြစ်ခဲ့ကြပြီး တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံ လိုအပ်သည့်အချိန်တွင် အပြန်အလှန် ကူညီခဲ့ကြ သည်များရှိပါကြောင်း၊ ယနေ့ကာလတွင် ဗီယက်နမ်- မြန်မာ ဆက်ဆံရေးသည် အထူး ကောင်းမွန်ပြီး နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် အစိုးရအချင်းချင်း၊ ပါလီမန်အချင်းချင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပြည်သူများ အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နေချိန်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေသော ပမာဏထက် ပိုမိုရင်းနှီးနိုင်ရန် ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်ပြီး အခြားမိတ်ဖက် နိုင်ငံများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြရန် တိုက်တွန်းသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် စက်မှုလယ်ယာဖြစ်ထွန်းရေးနှင့် စိုက်ပျိုးထုတ်ကုန် တိုးတက်ရေး အလေးထား ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု များ တိုးတက်လာသည်နှင့် အမျှ နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပြီး နှစ်ဖက် အကျိုးအမြတ်များ ခံစားရ မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရှိရင်းစွဲနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးများအား ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန် အောင် လုပ်ဆောင် သွားကြမည်ဖြစ်ပါ ကြောင်းဖြင့် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြပြီး ဆွေးနွေးပွဲ အပြီးတွင် အမှတ်တရ မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက နှင့်အတူ ပြည်သူ့လွှတ်တော် နှင့် အမျိုးသား လွှတ်တော်တို့မှ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများဖြစ်ကြသော ဦးသိန်းဇော်၊ ဦးလှမြင့်ဦး၊ ဦးဋ္ဌေးမြင့်၊ ဒေါက်တာခင်ရွှေ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ဦးဝင်းလှိုင်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြပြီး ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ နှင့်အတူ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ၊ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး H.E. Mr. Dao Viet Trung ၊ ဗီယက်နမ်- မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Nguyen Manh Tien ၊ ဟနွိုင်းမြို့ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Pham Huy Hung နှင့် အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြသည်။
၂၀၁၄ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက နှင့် မြန်မာလွှတ်တော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသား လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Nguyen Sinh Hung က ဟနွိုင်းမြို့ Sheraton Hotel ၌ ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့သည်။ ညစာသုံးဆောင်နေစဉ် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှုအကပဒေသာအဖွဲ့မှ ရိုးရာ အကများဖြင့် တင်ဆက်ဖျော်ဖြေ ကြသည်။ အခမ်းအနားအပြီး၌ ယဉ်ကျေးမှုအကပဒေသာအဖွဲ့အား ပန်းစည်းလက်ဆောင် ပစ္စည်းများ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး အမှတ်တရ မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။